Chelsea oo guul kaga gaartay kooxda Leeds United garoonka Stamford Bridge… +SAWIRRO – Gool FM
Chelsea oo guul kaga gaartay kooxda Leeds United garoonka Stamford Bridge… +SAWIRRO
Dajiye December 11, 2021
(London) 11 Dis 2021. Chelsea ayaa guul soo laabasho ah kaga gaartay kooxda Leeds United garoonka Stamford Bridge, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-2, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada Isbuuca 16-aad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Chelsea iyo Leeds United ku kala nasteen barbardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 28-aad kooxda martida ahayd ee Leeds United ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool u badelay laacibkooda Raphinha, ciyaarta ayaa waxay sidaas ku noqotay 0-1.
Laakiin 42 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Chelsea ayaa dhalisay goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay Mason Mount oo caaawin ka helay saaxiibkiis Marcos Alonso.
Daqiiqadii 58-aad Chelsea ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool ka dhigay laacibkooda khadka dhexe ee Jorginho dheesha ayaa waxay sidaas ku noqotay 2-1 ay ku hoggaamineysay Blues.
83 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Leeds United ayaa dhalisay goolka barbardhaca waxaana 2-2 ka dhigay laacibkooda Joe Gelhardt, waxaana caawinta goolkan loo diiwaan galiyay Tyler Roberts.
Balse markale daqiiqadii 90 + 4-aad kooxda Chelsea ayaa loo dhigay rigoore Jorginho ayaana sida caadiga ahayd qaatay wuxuuna ka dhigay gool, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 3-2 ay ku hoggaamineysay Blues.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 3-2 ay Chelsea kaga adkaatay kooxda Leeds United oo marti ugu ahayd garoonka Stamford Bridge, Blues ayaa waxay wali ku jirtaa kaalinta Saddexaad ee kala sareynta horyaalka Premier League, waxayna leedahay 34 dhibcood.
Liverpool oo garoonkeeda Anfield guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Aston Villa… +SAWIRRO
Manchester United oo si dirqi ah guul kaga soo gaartay kooxda Norwich City oo ay booqatay… +SAWIRRO